Faa'iidooyinka qaraha: wax badan oo ka badan miraha cusbooneysiinta | Ragga Stylish
Waxaa la ogyahay inay gacan ka geysato garaacista kuleylka xagaaga, laakiin faa iidooyinka qaraha way sii fogaanayaan. Kaalsho macaan oo hooseysa, wuxuu ka qayb qaataa dhowr geeddi-socod oo muhiim ah jirka oo dhan.
Haddii aad ka mid tahay kuwa cuna qaraha badan xagaaga, tani waxay kaa caawin doontaa inaad dib isugu xaqiijiso xulashadaada cuntada. Haddii kale, Ka dib markaad ogaatay waxtarkeeda badan ee cajiibka ah, waxaad beddeli kartaa maskaxdaada oo aad u bilaabi kartaa adeegsiga si joogto ah..
1 Sababaha loo cuno qaraha
1.1 Waxay ku yar tahay kalooriyeyaasha
1.2 Kuu siinayaa tamar
1.3 Dayactirka maqaarkaaga
1.4 La dagaallama maqaarka qalalan
1.5 Ilaali aragga
1.6 Waxay yareysaa cadaadiska dhiigga
1.7 Waa lidka kansarka
1.8 Wuxuu xoojiyaa difaaca
Sababaha loo cuno qaraha
Qeyb wanaagsan oo ka mid ah waxtarrada qaraha waxaa u sabab ah hodantinimada ay leedahay biyaha, taas oo kaa caawinaysa inaad biyo ku joogtid. Iyadoo boqolkiiba biyaha in kabadan 90%, qaraha ayaa si gaar ah u xiiso badan bilaha kulul.
Laakiin waxaa jira sababo kale oo badan oo mirahaan loogu daro cuntadaada, oo ay ku jirto dheefshiidka fudud. Maaddaama ay tahay mid aad u jilicsan oo cusub, waxay guud ahaan u roon tahay nidaamka dheef-shiidka. Haddii ay ku siiso dhibaatooyin, wax dhici kara mararka qaarkood, tixgeli inaad u cunto hal cunto halkii aad ka macaashi lahayd. Qadada iyo cunnada fudud waa laba waqti oo waaweyn oo maalintii la sameeyo.
Waxay ku yar tahay kalooriyeyaasha
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee lagu khamaarayo qaraha waa iyada qaadashada kalooriga oo hooseeya marka loo eego cuntooyinka kale ee macaan. Qaraha kaliya wuxuu siiyaa 30 kaloori 100kii garaam ee cuntada ah, halka jalaatada (xagaaga kale ee caadiga ah) ay dhaafto 200. Uma baahnid inaad ka baabi'iso jalaatada cuntadaada, laakiin waad u haysan kartaa abaal marin toddobaadle ah.
Haddii aad ku beddesho jalaatada iyo macmacaanka kale ee kalooriga laba xabbo oo xaleef qaraha ah, kaliya ma jareysid kalooriyada maqnaanshaha dufanka awgood, laakiin sidoo kale kaa caawin doona inaad dareentid buuxsanaan. Ku qanacsanaanta rabitaankaaga cunno kasta waa lagama maarmaan, maadaama taasi ay tahay tan kaliya ee lagu yareyn karo halista cunnada fudud inta u dhexeysa cuntada, caado u horseedda culeys iyo cayil.
Kuu siinayaa tamar
Qaraha wuxuu keenaa antioxidants, amino acids iyo potassium. Lagu daro waxyaabaha ay ka kooban tahay biyaha, dhammaan nafaqooyinkaani waxay matalaan qiyaas wanaagsan oo tamar ah. Sidaa awgeed, midhahan waxay kaa caawin kartaa inaad daahiso bilowga daalka iyo murqaha jimicsiga.
Waa in la ogaadaa in markay tahay ka faa'iideysiga tamartaada, jimicsiga kadib waa waqti fiican sida jimicsiga kahor. Waana ka dib tababarka ka dib muruqyo xanuun soo bixi kara. Intaa waxaa sii dheer, jidhku wuxuu u baahan yahay inuu buuxiyo shidaalkiisa keydka sababtoo ah dadaal badan oo la bixiyay. Iyo tayada qaraha ayaa ku habboon.
Waqtiyada shaqo badan, jirka waxaa lagu riixayaa xadka tanina waxay ku dhamaanaysaa in lagu ogaado muuqaalkaaga. Haddii ay adag tahay inaad waqti nasato muddooyinkan dambe, maqaarkaagu wuxuu u eg yahay inuu ka qallalo kana adkaado sidii caadiga ahayd. Nasiib wanaag, oo lagu daro qaraha cuntadaada ayaa kaa caawin kara yareynta dhibaatada. Sababta ayaa ah midhahan waxay door bidaa fuuq-celinta iyo dabacsanaanta maqaarka iyada oo ay ugu wacan tahay hodantinimada biyaha iyo jiritaanka fiitamiinnada A, B6 iyo C in ay ka kooban caafimaad.
La dagaallama maqaarka qalalan
Fiiri maqaalka: Maqaarka qallalan. Halkaas waxaad ka heli doontaa dhammaan furayaasha lagula dagaallamayo maqaarka qalalan, laga bilaabo nadaafadda illaa cuntada.
Araga indhaha wuxuu la kulmaa hanjabaado badan oo sababi kara inuu sii xumaado waqtiga. Haddii aad rabto inaad tan iska ilaaliso, khubaradu waxay kugula talinayaan inaad ka fogaato shaashadda kombiyuutarka 30-60 daqiiqo kasta oo aad ku hagaajiso shay fog.
Istaraatiijiyaddaada si aad u ilaaliso indhahaaga, cuntooyinka sida qaraha midkoodna kama maqnaan karo. Waad ku mahadsantahay ka qayb qaadashada fitamiin A (taas oo waxay hagaajisaa aragga waxayna yaraynaysaa halista araga ama xumaanshaha maqaarka), midhahan waxay gacan ka geystaan ​​kor u qaadista caafimaadka indhaha.
Waxay yareysaa cadaadiska dhiigga
Sida muuqata waa mid kamid ah qaybaha qaraha wuxuu kobciyaa socodka dhiigga wuxuuna yareeyaa cadaadiska dhiigga. Sidan oo kale, cunista mirahaan si joogto ah waxay caawin laheyd kahortaga cudurada wadnaha.
Waa lidka kansarka
Lycopene, walaxda mas'uulka ka ah midabkaas casaanka ah ee ka dhigaya mid aad u macaan, waxay yareyn kartaa halista kansarka, iyo sidoo kale sonkorowga. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in qaab nololeedka la socdo: xaddid khamriga, tubaakada oo ay si joogto ah u ciyaaraan isboorti.
Qaraha ma aha cuntada kaliya ee bixisa maaddada loo yaqaan 'lycopene', laakiin waxaa jira miro iyo khudrad kale oo iyaguna ku jira. Si kastaba ha noqotee, xaddiga antioxidant-kan ee ku jira qaraha ayaa ka mid ah kuwa ugu sarreeya.
Wuxuu xoojiyaa difaaca
Ma ogtahay in faa iidooyinka qaraha sidoo kale laga dareemi karo nidaamka difaaca jirka. Way ku fiican tahay qof walba inuu yeesho difaac wanaagsan, mirahaanna way ku caawin karaan. Qaraha ayaa xoojin doona difaacaaga, kaas oo waxay kaa caawin doontaa inaad sifiican ula dagaalanto infekshannada markay dhacaan. Ugu dambeyntiina, jirkaagu wuu sii xoog badnaan doonaa, caafimaadkiisuna waa haddii aad cunto qaraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Faa'iidooyinka Qaraha